News - လေဟာနယ်မုန့်စိမ်းရောနှောခြင်း၏နိယာမနှင့်ကောင်းကျိုးများ
မုန့်ညက်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုတွင်မုန့်စိမ်းရောနှောခြင်းသည်မုန့်ညက်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ kneading ၏ပထမအဆင့်မှာဂျုံမှုန့်သည်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူရန်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဂျုံမှုန့်သည်စပါးဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းရေကိုစုပ်ယူပြီးဂျုံမှုန့်အတွင်းရှိ gluten ကိုကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဂျုံမှုန့်မှစုပ်ယူသောအစိုဓာတ်ပမာဏသည်ဂျုံမှုန့်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။
လေဟာနယ်ရောနှောစက်၏ 1. လုပ်ငန်းစဉ်နိယာမ:
Vacuum kneading ဆိုသည်မှာမုန့်စိမ်းကိုလေဟာနယ်နှင့်အနုတ်ဖိအားအောက်တွင်ထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျုံမှုန့်အမှုန်များသည်အနုတ်လက္ခဏာဖိအားအောက်တွင်ရေနှင့်နှိုးသည်။ လေထုမော်လီကျူး၏အတားအဆီးမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ရေကိုပိုမိုအပြည့်အဝ၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်ညီမျှစွာစုပ်ယူနိုင်ခြင်းဖြင့်မုန့်စိမ်း၏ပရိုတိန်းကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု, အလွန်ခေါက်ဆွဲထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးတိုးတက်အောင်။
လေဟာနယ်ရောနှောစက်၏ 2. လုပ်ငန်းစဉ် function ကို:
●သာမန် kneading technology နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်မုန့်စိမ်း၏အစိုဓာတ်ကို ၁၀ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးနိုင်သည်။
●မုန့်စိမ်းထဲရှိရေကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးလှိမ့်နေစဉ် roller ကပ်ကပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ မုန့်စိမ်းမှုန်များသည်သေးငယ်ပြီးအစာကျွေးခြင်းသည် ပို၍ တူညီပြီးချောမွေ့သည်။
●ဂျုံမှုန့်အမှုန်များသည်ရေကိုညီမျှစွာနှင့်အပြည့်အဝစုပ်ယူနိုင်ပြီး၊ gluten ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုအပြည့်အဝဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်မုန့်စိမ်းကိုရွှေရောင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ (ဖျက်သိမ်းလျှော့ချ) ။
●ဖုန်စုပ်စက်တွင်အဆင့်နှစ်ဆင့်မြန်သောရောစပ်ခြင်း၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရေအမှုန့်ရောစပ်ခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းနည်းသောပွားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ရောစပ်သောအချိန်တိုပြီးလေထုထဲတွင်ခုခံနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကစွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများသာမကမုန့်စိမ်းကိုပူနွေးစေသည်။ အပူချိန်မြင့်တက်မှုသည် ၅ ℃ -10 by ခန့်လျော့နည်းသွားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မုန့်စိမ်း၏အပူချိန်အလွန်မြင့်မားမှုကြောင့်ပရိုတိန်း၏ denaturation ကိုရှောင်ရှားပြီး gluten ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းကိုပျက်စီးစေသည်။